Värjäys uye kupedza michina wakaisvonaka chigadzirwa kukura uye utsanzi (Recommended muunganidzwa) - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Värjäys uye kupedza michina wakaisvonaka chigadzirwa kukura uye utsanzi (Recommended muunganidzwa)
1. Gas / mvura iyerere värjäys kwacho
Traditional gasi / mvura iyerere värjäys dzinowanzotsigi- kushandiswa nokuda pretreatment uye värjäys dzakarukwa kana makemikari faibha micheka, apo itsva gasi / mvura iyerere värjäys anogona kusangana zvaidiwa multi-sangano, multi-Style, batch mangé diki uye siyana akasiyana donje yaro Micheka multi-faibha dzakarukwa, uye haagoni kushandiswa senzvimbo negoho chinamatidzwa kuti kuramba kana kuchitonhora hombe värjäys.
In chigadzirwa kukura uye utsanzi, gasi / mvura iyerere munogona kuona mubatanidzwa värjäys uye manyorerwo okugadziridza:
(1) Loose tefa (uzere omarara), Peng nyoro dzakakwirira micheka kwakavharwa nenyama, kunyanya rine polyester micheka;
(2) pamusoro shrinkage unaku kuti music (akadai donje brocade jira, "munyu shrinkage" mvura ruvara jira, mutsvuku rakarukwa nedzimwe monyorora coefficient);
(3) humburumbira pre-kurapwa, värjäys dzinongoitika shrinkage, dzinongoitika unaku duku music yokufaranuka Style jira;
(4) dzakaonda jira, jacquard jira, miviri pasi yakarukwa uye weft batana gauze jira;
(5) suede jira (wakachena donje, polyester uye brocade ematongerwo sirika, pemvura unaku zvakajeka, vanonzwa shinda, asingaoneki);
High ruvara fastness micheka (rima nyoro vachidzipukuta fastness pamusoro kugiredhi 3, multi-faibha yakasvibiswa ruvara giredhi pamusoro 4 vana \_ 's kusakara, tooling micheka);
7. Products ane mapuroteni fibers (akadai shinda, nesirika uye netsuro bvudzi);
"Salt unyana" dzomucheka zvinogadzirwa, TM zvigadzirwa, dzakaonda viscose micheka, simba monyorora kirasi.
2. Traditional mercerization uye "munyu shrinkage"
Wevasungwa tsika mercerized nesipo Kazhinji 23 ~ 26° Iva, uye mumatenhere cellulose riri shoma. Pamusoro pe, pasi mamiriro makakatanwa, ari infiltration kuti nesipo kupinda internet cystic mhango achava kudziviswa, riri nyore kukonzera pamusoro mercerization. "Salt shrinkage" ndiko kushandiswa 36° Iva Lye mercerizing pasi makakatanwa-vakasununguka ezvinhu, kuita faibha kubereka zvizere kuzvimba uye marwadzo, maratidzirwo ndiko kuwedzera ruvara uye kubwinya of rejira kuzara, Vapfumi zvakasimba kunzwa, pedza uye mukana wokushandiswa, akakodzera donje machira nomucheka micheka. Sezvo Mufurakisi faibha iri chiputu mamiriro, pashure "salt shrinkage" mabatiro, ichabereka zvibereko zvikuru marwadzo, Kuita Mucheka jira kuva chiine, kubudisa pfungwa tightness kuti hazvigoni kuumbwa kuburikidza kurukiswa. Anotevedzana kana nokusazvibata Washing pashure "munyu shrinkage" unobereka yakasiyana shrinkage Migumisiro.
Jira kubatwa "munyu shrinkage" gadzira
Pamusoro pe, siyana nesipo anogona mercerize mudale uye zvakajairika viscose faibha, uvandudze ruvara unevenness uye pasi ruvara saturation pamusoro 2 nemhando faibha kana dzakarukwa donje faibha
3. Emery nokugeda uye zvipenyu pakuonekwa
Panguva kugadzira uye guruva rakatsetseka jasi micheka, hembe micheka, vanoda jira pamusoro yakachena, inopenya uye yakachena, zvakajeka unaku, nyoro kubwinya, anzwe zviri pezvinhu (Zvinhu Zvisina Basa asisaoni, asi costumers) kushanda, anogona kushandisa Emery rokutanga kukuya Mao (240/400, gumi, tichifunga Micheka siyana ikashandiswa), uye ipapo shure biopolishing, bvisa pemvura bvudzi, tora kuti microvilli, suede Style kushanda.
Emery frosted uye jira biopolished
For yakaisvonaka tiansi TM jira, Emery nokugeda uye bio-makorari zvinogona kushandiswa kuderedza abrasives anokonzerwa mbishi faibha, uye pave mugumisiro nyoro vanonzwa uye Peach ganda, pamwe kunyange uye akatunhidzwa kubata uye yepamusoro. Izvi zvinogona kureva polyester / zvinhu zvenaironi ematongerwo sirika jira kuderedza dambudziko zvakare nyoro uye waxy jira anokonzerwa alkali rutapudzo, kuitira kuti kusangana nani zvinodiwa jasi mhepo uye bhachi jira isina kukwana uye kumeso.
4, sikirini bemhapemha michina
Chinovhara bemhapemha zvemichina dzinowanzotsigi- kushandiswa kutanga kuroorwa kuroorwa Absorção de Água (rimwe divi Anti-achitevedzera mvura, rimwe divi zvinogona kupinza mvura) uye vaviri-mavara micheka. Rakarukwa chaionekwa isapinda uye mwando permeable dzinowanzotsigi- rinoumbwa Schoeller \_ 's 3 xdry ® kupedza Michina, kuti mvura mumiririri uye thickener vari kugadziridzwa viscosity mu 16000 ~ 18000 mPa S. (Muzvarirwo kudhindwa namatidza viscosity~pamusoro 4000 ~ 5000 mPa, S), nokuti nokusimbaradza rejira adopts rizere nezvemidzimu pakukora yakakwirira nickel pajira riya Network vachatitaka isapinda slurry pamusoro pemvura jira muurongwa yekamuri muchimiro, chikumbiro ndiyo infiltration ezvinhu, yeuka kuroora isapinda, nyorova, kufema, imwe-nzira mwando Absorção de Água ziya basa, anewo rimwe mhepo basa. In shi route trafigura muforoma unhani Machine, muhombe sikirini wokudhinda haubvi nebasa iri, nyore kudhinda kuburikidza, gogonera), zano anogona kuona rakafanana mugumisiro kwokuva PTFE firimu, pamusoro kugadzirwa mutengo, Zvinokosha zvakaisvonaka uye unhu kutsiga ane yakakura nani, rejira urwu akakodzera yakaderera umbirimi muviri, kushandiswa zvikuru munyika fashoni yokufaranuka yemitambo zvipfeko, vakawanda pamwe chitubu uye matsutso hembe.
Nemicheka kubatwa 3XDRY® Michina
Pamusoro pe, kushandiswa pajira riya unhani michina anogonawo kushandiswa kudhinda mavara akasiyana-siyana vanoshingaira ruvara, kaviri ruvara kushanda, akakodzera bhurukwa, bhachi micheka.
5. Short muitiro pretreatment mabikirwo kunzwisisa zvoutachiona makemikari
Traditional donje jira desizing ANOSHANDISA amylase kana caustic pasoda / rehydrogen peroxide, uye ANOSHANDISA kuramba kana kutonhora reactor nzira kubvisa kukura pamusoro jira. Zvakaipira ndiko kugarisana. Amylase chete uchiora starch, asi haana chinomuwira PVA. Caustic mushaba / rehydrogen peroxide inotonhora reactor ane imwe kubviswa sei PVA, asi hazvigoni kubvisa starch slurry, uye hazvina akakodzera multi-faibha zvigadzirwa. Pamusoro pe, pane zvimwe zvinetso zvakadai akaoma Mabatirwo tsvina mvura, zvakaoma aone, uye nyore kugadzira uchigara.
Remubatanidzwa zvoutachiona enzayemu pretreatment kwacho ndiko kushandiswa amylase, catalase, pectinase, rehydrogen peroxide, non-Ionic emulsifier, zvakananga kana mushure singeing ikanyanya kushanda Urume, uye ipapo kupisa Kuchengetedzwa dutu 12h kumusoro, pashure dzakaonda jira zvakananga muno, jira zvakananga yakabikwa bleaching.
Zvakanakira pfupi muitiro pretreatment kuti makemikari dzakaoma dzinosanganisira:
(1) yakafara anochinjika kuti faibha, nyore kugadzira kuzvidzora;
(2) pulp ane refu Kubviswa mwero uye anogona kuzadzisa PVA kudzikisirana. Rine zvakwakanakira pachena muna kushanda mukuru-count uye yakakwirira arambe achirema micheka.
(3) ine zvakwakanakira pachena muna kushanda yakakwirira kwakavharwa nenyama uye yeshinda micheka;
(4) zvakwakanakira pachena mune simba kuchengetedza, achine rutapudzo uye kunwa rutapudzo;
(5) rinogona kuzadzisa kuparadzana tsvina wevasungwa uye dilution, riri inoita kuti Resource Utilisation.
(kwazvinobva: nhoroondo yepamutemo yemachira emachira)
Technical post | kuda kuziva kuti ungagadzira sei bamboo uye mitsetse mitsetse pamitambo yemitambo?Dzvanya kuti uwane zvimwe